स्वास्थ्य पेजएन्टिबायोटिक्सको दुष्प्रभावबाट कसरी जोगिने ? - स्वास्थ्य पेज एन्टिबायोटिक्सको दुष्प्रभावबाट कसरी जोगिने ? - स्वास्थ्य पेज
एन्टिबायोटिक्सको दुष्प्रभावबाट कसरी जोगिने ?
सकेसम्म एन्टिबायोटिक औषधी सेवन नगर्नु राम्रो हो । यसले हाम्रो भित्री अंगहरुमा नराम्ररी असर पुर्‍याउँछ । यद्यपी कहिले कहिं एन्टिबायोटिक खानै पर्ने हुनसक्छ । कतिले त अज्ञानताबस् पनि एन्टिबायोटिक खाइदिन्छन् । एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट धेरै छ । सामान्यत पेट फूल्नु, पेट गडबडी हुनु, उल्टी हुनु, पिशाबमा इन्फेक्सन, एलर्जिक रियाक्सन यसको सेवनबाट हुने दुष्प्रभाव हुन् । तर, केहि यस्ता काइदा छन्, जसले एन्टिबायोटिकको दुष्प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । कसरी ?
एन्टिबायोटिक्सको सेवनले डायसिरयाको समस्या हुन्छ । यसबाट बच्नका लागि एन्टिबायोटिक्स कोर्सका दौरान आफ्नो खानामा गुड ब्याक्टेरियायुक्त दही समावेश गरौं । यसबाट शरीरर्लाइ डायरियाबाट रिकभर हुन मद्दत मिल्छ । प्रोबायोटिक योगर्टमा भएका ब्याक्टेरियाले हाम्रो आन्द्रामा सुरक्षा पत्रको निर्माण गर्छ र हानिकारक ब्याक्टेरियाका कारण एकत्रित भएका विषाक्त पदार्थलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । सन् २०११ मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार एन्टिबायोटिक्सका कारण हुने डायरिया रोक्न प्रोबायोटिक्स अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले एन्टिबायोटिक्सको कोर्सका दौरान वा कोर्स समाप्त भएपछि करिब एक मिहनासम्म प्रोबायोटिक्स योगर्ट खानु उचित हुन्छ । यदि चाहने हो भने डाक्टरको सल्लाह लिएर प्रोबायोटिक सप्लीमेन्ट्स पनि लिन सकिन्छ ।
लसुन एक प्रकारको प्राकृतिक एन्टिबायोटिक हो जसले शरीरलाई कुनै प्रकारको नोक्सानी नपुर्‍याइकन हानिकारक किटाणुहरुलाई नष्ट गरिदिन्छ । यसका अलावा यसमा एलिसिन नामक तत्व पाइन्छ जसले एन्टिबायोटिक्स सेवनबाट मिर्गौला र कलोजोलाई हुने क्षतिबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ । त्यसैले खानामा लसुन समावेश गर्नु राम्रो हुन्छ ।
मिल्क थिसल सप्लिमेन्ट्स
एन्टिबायोटिक्सले कलेजोलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ । यस्तोमा कलेजोलाई जोगाउन मिल्क थिसल नामक जडिबुटी फाइदाजनक हुन्छ । यस जडिबुटीमा रहेको एन्टिअक्सिडेट्सले कलेजोको रक्षा गर्छ । यस जडिबुटीमा सिलिबिनिन नामक तत्व पाइन्छ, जसले शरीरलाई डिटाक्सिफाई गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । बजारमा मिल्क थिसलका सप्लिमेन्ट्स लिक्वड, क्याप्सुल आदी रुपहरुमा उपलब्ध छन् । डाक्टरको सल्लाह लिएर यसको सही डोज लिनुपर्छ ।
यदि एन्टिबायोटिक्सको सेवनबाट उल्टी आउने समस्या भयो भने अदुवाको चियाले फाइदा पुर्‍याउँन सक्छ । अदूवामा रहने नेचुरल एन्टिबायोटिक्सले हानिकारक ब्याक्टेरियाका कारण उत्पन्न हुने स्वास्थ्यसम्वन्धि समस्यालाई हटाउँछ । ताजा अदुवामा एन्टिबायोटिक गुण पाइन्छ जसलाई खाँदा प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया सम्वन्धि बिमारीहरुसँग लड्नमा मद्दत गर्छ । दिनमा तीन पटक अदुवाको चिया पिउनुस । अदुवाको चिया बनाउनका लागि एक इन्च लामो अदुवा र्लाइ डेढ कप पानीमा १० मिनेटसम्म उमाल्नुस । त्यसपछि त्यसर्लाइ छानेर कागतिको रस हालेर पिउनुपर्छ ।
एन्टिबायोटिक्सले हानिकारक ब्याक्टेरियाका साथसाथै लाभप्रद ब्याक्टेरियालाई पनि मार्छ । यस्तोमा यदि तपाईं अत्इिधिक मसलादार, गुलियो वा कार्बोहाइड्रेटयुक्त भारी खाना खाने हो भने डायरिया र वान्ता हुने सम्भावना बढेर जान्छ । यसबाट बच्नका लागि एन्टिबायोटिक्सको कोर्सका क्रममा वा त्यसको केही दिनपछि कम तेल(मसलावाला सादा खाना खानुपर्छ । यस्तो खाना सजिलै पच्छ जसले पाचनतन्त्रमा बढि जोड पर्दैन । परिमाणामस्वरुप शरीरर्लाइ कडा एन्टिबायोटिक औषधिबाट रिकभर हुन मद्दत मिल्छ ।
एप्पल साइडर भिनेगर टनिक
एप्पल साइडर भिनेगर टनिकमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ, जसले शरीरमा मौजुद हानिकारक ब्याक्टेरियासँग लड्न सहयोग गर्छ । यसबाट डायरियालाई नियन्त्रणमा लिन पनि मद्दत मिल्छ । यसका लागि एक गिलासमा एक वा दुई चम्चा एप्पल साइडर भिनेगर मिलाएर पिउनुपर्छ । दिनमा दुईपटक यसो गर्नुस । पक्कै फाइदा मिल्नेछ ।
पानी र तरल पदार्थ
कडा औषधिको सेवनले मुख सुक्न थाल्छ र डाइरियाका कारण शरीरमा पानीको कमि पनि हुन्छ । यस समस्याबाट छुट्कारा पाउन हरेक दिन यथेष्ट मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । पानीमा चीनी वा नून हालेर पिउन सकिन्छ । यसका अलावा फलफुल र सागपातका जून पिउँदा फाइदा मिल्छ । तर, चिया, कफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंकका साथै अल्कोहलबाट टाढा रहनुपर्छ ।